China Durable washable kraft akwụkwọ mkpọchi uwe mmechi Etemeete akpa Natural ịchọ mma Bag factory na suppliers | Changlin
Inogide washable kraft akwụkwọ mkpọchi uwe mmechi Etemeete akpa Natural ịchọ mma Bag
Dị ka aha ahụ na-egosi, mpempe akwụkwọ kraft na-amịpụta bụ ụdị ọhụụ nke ihe nchekwa gburugburu ebe obibi, nke ejirila ụwa niile. Akụrụngwa nke asacha kraft akwụkwọ bụ eke eriri pulp, nke na-enweghị ihe ọ bụla na-emerụ ihe. Ọ nwere ike ịmegharị, na-emebi emebi, ma na-emegharị emegharị.
Ihe onwunwe: Akwụkwọ Kraft Arọ: 42g
Advantage: ihe okike，recyclable ，keukwu
Akwụkwọ nwere ike ịsacha
Akwụkwọ a na-agba agba nwere ike ọ bụghị naanị na ọ nwere ikike, nkwesi ike, nguzogide abrasion na njirimara ndị ọzọ nke akwụkwọ kraft, kamakwa nwere ụdị akụrụngwa akwa dịka ịsacha, nhicha-ọcha; Ya mere a na-akpọkwa akwụkwọ kraft a na-asacha dị ka "washable kraft paper" "washable kraft akwukwo "!
Ka ọ dị ugbu a, enwere obere ihe eji akwa kraft paper na ahịa, dịka obere akpa, akpa IPAD, akpa kaadị, akpa aka, mkpuchi akwụkwọ ọkwa dị elu na ihe ndị ọzọ. Offọdụ n'ime ihe ndị a nwere ike ịmachaa tupu ha ejiri ya, ma mgbe a gwachara ha, ngwaahịa a ga-etolite okpukpu ala, ihe okike na enweghị ọhụụ!
Akwụkwọ a na-akpụ akpụ bụ obere carbon na gburugburu ebe obibi. Ọ na-edozi nsogbu ahụ na akpa akwụkwọ kraft enweghị ike iburu unyi ma nwee ike ịsacha ya mgbe ọ ruru unyi.
eke ihe, mfe maka owuwu
Nke gara aga: Ppingzụ ahịa ịchọ mma ahaziri ezumike nkwakọ mposi akpa
Osote: Tyvek Akwụkwọ akpa inogide keosarị mkpọchi mmechi Etemeete Bag Natural ịchọ mma Bag
Polyester pink eco-enyi na enyi obere obere akpa ịchọ mma ...
Pu Pu Passport njide na ụgbọelu tiketi ...
Omenala Mejupụtara akpa Pu ịchọ mma Zip Etemeete obere akpa ...
Naịlọn nwa obere ịchọ mma njem azụmahịa p ...